Dowladda Britain oo taageero dhaqaale siineysa Soomaaliya – XAMAR POST
Taageeradaasina ay tahay mid wax looga qabanayo cunno nafaqo leh, biyo nadiif ah, adeeygyada caafimaadka aas aasiga u ah, talaalka xoolaha nool, taageeradan dheeraadka ah ayaa la sheegay in wax weyn ay ka tari doonto meeluhu abaaraha saameeyeen.
Kumanaano qoys mahelin waqti ay kaga soo kabtaan abaarihii sanadkii 2017-dii waxaana weli sidii ay u wajahayaan mashkilad kale. Xilli roobaadka oo labo jeer aanan ka da’in iyo xaaladaha cimilada xumaatay waqtiga jiilaalka ee bilihii Janaayo iyo Maarso ayaa keenay biyo yaraan, mirihii soo bixi lahaa iyo waxsoosaarka xoolaha nool oo hoos udhacay.
Phil Evans oo ah Madaxa Hay’adda DFID ugu qaabilsan xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in abaarta ay saameeysay malaayiin Soomaali ah, qaar badan oo kamid ah dadkaasi ay ka barakaceen guryahooda iyo wixii ay ku noolaayeen si ay u raadsadaan waxyaabaha nolosha aas aasiga u ah.
Lacagtan ayaa ah mid loogu talo galay in lagu soo iibiyo caawimaad lagu badbaadinayo nolosha kumanaano kun oo qof oo kujira xaalado walaac laga muujinayo.
Bishii April 2019-kii Saduuqa Jawaabaha dhexe ee degdegga ah ee QM “CERF” iyo xafiiska sanduuqa Beni’aadannimada Soomaaliya “SHF” ayaa sii daayay lacag dhan $45.7 million oo doolar si kor looqu qaado kaalamda wax looga qabanayo si loo badbaadiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Xafiiska Waaxda Horumarinta Caalamiga ah ee loo soo gaabiyo DFID ayaa maalgelinaya 84 million oo pound saddex sanno ee soo socota si wax looga qabto howlaha waqtiga dheer soo jiitamayay.
Masar oo maanta lagu qabanayo 56-sano guuradii kasoo wareegtay aas-aaska Ururka Midnimada Afrika.